इन्टरनेट टेलिभिजन डिसि नेपाल र यसको जनसर्म्पर्कका लागि कार्य | रामाभाष संजाल
इन्टरनेट टेलिभिजन डिसि नेपाल र यसको जनसर्म्पर्कका लागि कार्य
१. संस्थाको परिचय
२. जन सर्म्पर्क विभाग
३. जनसर्म्पर्कका स्रोत तथा साधनहरु
३.१ वेभसाइट, इमेल तथा इन्टरनेट
३.३ टेलिफोन तथा व्यक्तिगत सर्म्पर्क
३.४ संस्थागत सञ्चार
३.५ विभिन्न प्रकाशनहरु
५. सर्न्दर्भ सामाग्री-
५.१ व्यक्तिगत भ्रमण तथा अवलोकन
५.२ सेवागं्राहीहरुसँगको कुराकानी
५.३ कार्यालयवाट प्राप्त जानकारी
डिसी नेपाल, नेपाल र अमेरिकाको वासिङटन डिसीवाट संयुक्त रुपमा संचालित इन्टरनेट संजाल हो । सन् २००७ मा अमेरिकाको वासिङटन डिसीवाट संचालनमा आएको हुदाँ यस संस्था तथा वेभ साइटको नाम डिसी नेपाल रहन गएको हो । यस संस्थाले यो वेभ साइटलाई नेपालको र नेपाली भाषाको एक इन्टरनेट टेलिभिजनका रुपमा विकास र प्रवद्धन गरेको छ ।
विभिन्न काम विशेषले नेपाल बाहिर रहेका नेपालीहरुमा विशेषरुपमा यो वेभ साइट लोकप्रिय रहेको छ ।
विशेषत् प्रवासी नेपालीहरुका लागि विशेष ध्यान दिइ यस इन्टरनेट संजालमा सामाग्रीहरु राखिएका छन् । यस साइटमा थुप्रै सामाग्रीहरु भिडियो र फोटोमा आधारित रहेका छन् ।
जसमध्ये साप्ताहिक प्रवासी समाचार, साप्ताहिक चलचित्रका समाचार, दैनिक भिडियो समाचार, विभिन्न गतिविधि, अर्न्तवार्ता, गीत संगित, साहित्य, टेलिभिजन, रेडियो लगायतका सामाग्रीहरु यस संस्थाले आफै उत्पादन गर्दै आएको छ । यसरी समाचारमुलक सामागं्रीहरु उत्पादन गर्दैर् आएकाले यो संस्था अरु कुनै समाचार प्रधान संस्थाहरु भन्दा कम भने छैन् ।
त्यस मध्ये पनि थुपै्र अन्य रोचक वेभ साइटका लिङ्कहरु पनि यसै साइटमा रहेकाले यस संस्थाले संचालन गर्दै आएको यो वेभ साइट अझ महत्वपर्ूण्ा र आकर्ष रहेको पाउन सकिन्छ । यस कारण पनि यस डिसी नेपाल डट कम वेभ साइट पाठक तथा दर्शकहरुमा लोकप्रिय बन्न सफल भएको पाउन सकिन्छ । डिसी नेपालका सम्पादक तथा प्रकाशक रामहरी सुबेदीका अनुसार डिसी नेपालको वेभ पेज प्रत्येक दिन ८० हजार देखि एक लाख २० हजारसम्म खुल्ने गरेको छ ।
सम्पादक तथा प्रकाशक सुबेदी अमेरिकी अन्तरिक्ष प्रक्षेपण संस्था नासा हेडक्वाटरका बरिष्ट इन्जिनियर समेत हुनु हुन्छ । इन्टरनेट प्रणालीको सुरक्षा, स्पेस भिडियो र्सभरलगायतकका काममा उहाँको विशेष दक्षता छ भने माइक्रोसफ्ट कम्पनीवाट उहाँले दक्षताको प्रमाण पत्र पनि पाउनु भएको छ ।
यसका साथै रामहरी सुबेदी जी उडल्याक ग्रोसरी स्टोर नामक व्यावसायीक संस्थाका प्रमुख समेत हुनु हुन्छ ।
यस डिसी नेपालमा जनसम्पकर्ंका लागि छुट्टै जन सर्म्पर्क विभागको व्यवस्था गरिएको छैन । यहाँका सबै जनसर्म्पर्कका कामहरु यस संस्थामा रहेको सोधपुछ शाखाले र यस संस्थाका सम्पादक तथा प्रकाशक रामहरी सुबेदी आफै गर्नु हु्न्छ । यस संस्थामा प्राय जसो उपभोक्ता तथा प्रयोगकर्ताहरु अहिलेको आधुनिक संचार साधन इमेल र टेलिफोनका माध्यमवाट सर्म्पर्कमा आउने गर्छन । टेलिफोन मार्फ सर्म्पर्कमा आउने सबै सम्वन्धित व्यक्तिहरुलाई यहाँको सोधपुछ शाखामा रहनु भएका एक महिलाले नै जनसर्म्पर्कको काम गर्नुहुन्छ । यसका साथै यस संस्थाका सम्पादक तथा प्रकाशक रामहरी सुबेदीले भने इमेलवाट पं्राप्त पत्रहरुको जवाफ दिने, बाहिर विभिन्न संस्थाका व्यक्तिहरुसँग भेटघाट गर्नेलगायतका अरु जनसर्म्पर्कका कामहरु पनि गर्नु हुन्छ । यसका अलावा यस संस्थामा कार्यरत पत्रकार तथा अरु कर्मचारीहरुवाट पनि जनसर्म्पर्कका कामहरु हुदै नै आएका छन् ।
डिसी नेपाल एक इन्टनेट सञ्जालका माध्यमवाट संसारका कुना कुनामा जाने एक इन्टरनेट टेलिभिजन हो । यो पहँच भित्र रहेका सबै मानिसहरुको बीचमा जाने भएकाले पनि यस संस्थाका लागि जन सर्म्पर्कको आवश्यकता अति नै धेरै नै मात्रामा रहेको पाउन सकिन्छ । जन मानससम्म पुगेर नै यस संस्थाको उद्देश्य पुरा हुने भएकाले पनि डिसी नेपाल जनसर्म्पर्कका लागि अति नै संबेदनशील रहेको पाउन सकिन्छ । यो एक व्यवसायिक समाचार तथा मनोरञ्जनात्मक संस्था भएकाले पनि जनसर्म्पर्क विना यस संस्थाको काम पुरा हुनै सक्दैन । इन्टरनेट सञ्जाल भित्र लाखौको संख्यामा वेभ साइटहरु हामी पाउन सक्छौ । त्यसमाथी पनि नेपाली भाषामा संचालित वेभ साइटहरुको संख्या पनि अति नै धेरै मात्रामा पाउन सकिन्छ । यसरी थुप्रै प्रतिस्पर्धीहरुबीच आफ्नो छुट्टै अस्तित्व बनाउनु र पाठक तथा उपभोक्ताहरुलाई आकषिर्त गरि राख्नु ठुलो चुनौती नै हो । यस कारण पनि जनसर्म्पर्कले यहाँ महत्वपर्ुण्ा भुमिका खेलेको छ भन्दा सायदै अतियुक्ति होला ।
अध्ययनका क्रमका म यस संस्थामा रहदाँ यस डिसी नेपालले जन सर्म्पर्कका लागि व्यक्तिगत तथा आधुनिक प्रणालीहरु सहितलाई समेत जनसर्म्पर्कका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाए । प्रभावकारी जनसर्म्पर्क लागि यस डिसी नेपाल संस्थाले टेलिफोनदेखि इमेल इन्टरनेट तथा व्यक्तिगतदेखि संस्थागत सञ्चारसम्मका स्रोत साधनहरु जनर्सर्म्पकका लागि प्रयोगमा ल्याइने गरेको छ ।
डिसी नेपाल आफैमा एक इन्टनेट सञ्जालमा आधारित संस्था भएकाले र यस संस्थाका सम्पादक तथा प्रकाशक रामहरी सुबेदी इन्टनेट सम्वन्धि कार्यका दक्ष भएकाले इन्टरनेट र इमेलवाट जनसर्म्पर्क लागि विशेष फाइदा हासिल गर्ने गरेको पाइन्छ । यसका अतिरिक्त यस संस्थाले जनसर्म्पर्कका लागि
१. वेभसाइट, इमेल तथा इन्टरनेट
३. टेलिफोन तथा व्यक्तिगत सर्म्पर्क
४. संस्थागत सञ्चार
५. विभिन्न प्रकाशनहरु
आफ्नो मुख्य स्रोत साधनका रुपमा प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइयो । यहाँ दिइएका बुद्धाहरुलाई विस्तारमा तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
डिसी नेपाल आफैमा एउटा आधुनिक वेभमा आधारित संचार माध्यम हो । यस संस्थाले आफ्नो सेवा नै वेभ अर्थात वेभ साइटवाट दिएको छ । यस संस्थाको आफ्नै वेभ साइट धधध।मअलभउब।अि
वाट विश्वभर आफ्नो पहँुच बनाएको छ । यस डिसी नेपालको प्रमुख अङ्ग नै यो वेभ साइट हो । यही साइटका कारण यो संस्था चलेको छ । यो वेभ साइटको वेभ पेजमा यस संस्थाले साप्ताहिक प्रवासी समाचार, साप्ताहिक चलचित्रका समाचार, समाचार, अर्न्तवार्ता, विचार समाग्रीहरु, अन्य विविभ घटना क्रमहरु लगायतका थुप्रै सामाग्रीहरु अपलोड गर्ने गरेको छ ।यसका अतिरिक्त आफ्ना सेवाग्राहीहरुका लागि संस्थाको ’boutमा जानकारी, सेवा र सुविधा तथा आफ्ना सर्म्पर्क ठेगाना पनि उपलब्ध गराएको छ । यो संस्थाले वेभ साइट कै लागि काम गर्ने भएकाले पनि यस संस्थाको जनसर्म्पर्कका लागि वेभ साइटले ठुलो भु्मिका खेलेको छ ।
यस डिसी नेपाल संस्था वेभ साइट र इन्टरनेटवाटै आफ्नो कार्य सम्पादन गर्ने भएकाले यसले इन्टरनेटालाई पनि आफ्नो जनसर्म्पर्कको माध्यम बनाएको छ । यस संंस्थ्ााले इन्टरनेटबाटै अरु वेभसाइटहरुसँग लिङ्ग गरेर आफ्नो जनसर्म्पर्क बढाएको छ । यसका साथै आफुलाई चाहिने थुप्रै सामाग्रीहरु पनि इन्टरनेट कै माध्यमवाट लिने र दिने पनि गरिरहेको छ । आफ्ना लाखौ सेवाग्राही तथा उपभोक्ताहरुको इमेलहरु पनि यसै इन्टरनेटवाट डिसी नेपालले पठाउने र प्राप्त गर्ने गरेको छ । त्यसैले यस संस्थाले जनसर्म्पर्कका लागि वेभसाइट, इमेल तथा इन्टरनेटको व्यापक प्रयोग गर्ने गरकेा छ ।
डिसी नेपाल संस्थाले आफ्ना उपभोक्ता तथा सेवाग्राहीहरुलाई आकर्षा तथा जानकारीका लागि विज्ञापन पनि गर्ने गरेको छ । यस संस्थाले विज्ञापनका लागि विभिन्न कार्यक्रमहरुको प्रायोजन गर्ने अरु मिडिया तथा वेभ साइटहरुमा आफ्नो विज्ञापन गर्ने लगायतका कार्यहरु पनि यस डिसी नेपालले जनसर्म्पर्कका लागि गर्ने गरेको पाइयो । छापा माध्यमहरुमा यसले विशेष गरि सुचना प्रविधि सम्वन्धि पत्रपत्रिकाहरुमा विज्ञापनहरु गर्ने गरको छ । यस संस्थाका सम्पादक तथा प्रकाशक रामहरी सुबेदी अहिलेको युग नै विज्ञापनको युग भएकाले यस तर्फपनि ध्यान दिनु परेको बताउनु हुन्छ । उहाँ आफु स्वंय व्यवसायमा संलग्न रहनु भएकाले पनि विज्ञापनले नै विकाउन मद्दत गर्ने बताउनु हुन्छ । विज्ञापनवाट पनि थुपै्र व्यक्तिहरु आफ्नो सर्म्पर्कमा आउने गरेको पनि उहाँको व्यक्तिगत अनुभव पनि छ । संस्थाको बढी भन्दा बढी मानिसहरुको बीचमा जाने आफ्नो उद्देश्य भएकाले पनि विज्ञापन राम्रो जनसर्म्पर्कको माध्यम बनेको छ यस संस्थाका लागि ।
अहिलेको यो आधुनिक संसारमा टेलिफोन हरेक व्यवसायिक संस्था तथा व्यक्तिहरुले बढी भन्दा बढी प्रयोगमा ल्याउने संचार साधन हो । यस संस्था डिसी नेपालले पनि टेलिफोनलाई आफ्नो जनसर्म्पर्कका लागि आफ्नो स्रोत र साधनका लागि प्रयोगमा ल्याएको छ । संस्थाका सम्पादक तथा प्रकाशक रामहरी सुबेदीका अनु्सार दैनिक सयौ मानिसहरु टेलिफोन माध्यमवाट जनसर्म्पर्कका आउने गर्दछन् भने आफु पनि थुपै्र मानिसहरुका बिचमा टेलिफोनकै माध्यमवाट जन समक्ष जनसर्म्पर्कका लागि जाने गरिएको छ । त्यसमाथी डिसी नेपाल समाचार माध्यम पनि भएकाले टेलिफोन जनसर्म्पर्कका लागि एक महत्वपर्ुण्ा साधन समेत भएको छ ।
यसैबीच टेलिफोनका अतिरिक्त यस संस्थाले व्यक्तिगत सर्म्पर्कलाई पनि जनसर्म्पर्कको एक दरिलो माध्यमका रुपमा विकास गरेको पाउन सकिन्छ । समाचार सामाग्रीहरुका साथै वेभ साइटमा विज्ञापन र अरु फोटो, कार्यक्रमका भिडियो, बृत्तचित्रलगायतका सामाग्रीका लागि पनि व्यक्तिगत सर्म्पर्कलाई जनसर्म्पर्कको माध्यम बनाइएको छ । टेलिफोन तथा व्यक्तिगत सर्म्पर्कका कारण पनि यस साइटमा थुपै्र सामाग्रीहरु आउने गरेको पनि यस संस्थाको भनाइ रहेको छ ।
डिसी नेपाल एक संचार साधन हो । एउटा संचार माध्यमका लागि जनसर्म्पर्कको महत्व कति आवश्यक छ भन्ने ’boutमा सबैले सहज अनुमान गर्न सक्दछ । संचार केही हद सम्म सम्वन्धकै आधारमा चल्ने गर्दछ । त्यसैले यस संस्थाले पनि आफु चल्नका लागि सम्वन्ध विस्तारलाई विशेष ध्यान दिएको पाउन सकिन्छ । डिसी नेपालले सम्वन्धका लागि विभिन्न दैनिक तथा साप्ताहिक प्रकाशन माध्यमदेखि रेडियो, टेलिभिजन एवं अनलाइन प्रसारण माध्यमसम्मलाई आफ्नो वेभ साइटमा समेटेको छ । यसका साथै आफुसँग भएका समाचार सुचनालाई अन्य संचार माध्यममा पठाएर पनि विभिन्न संचार माध्यमहरुसँग जनसर्म्पर्कका लागि संचार गर्ने गरेको छ । यसको स्पष्ट उदाहरण यसको वेभ साइटलाई हर्ेदा पनि किटान गर्न सकिन्छ । जति धेरै मानिस तथा संस्थाको सर्म्पर्कका जान सकियो त्यति नै ठुलो संख्यामा जनता समक्ष पुग्न सकिने भएकाले पनि यसले संस्थागत संचार र जनसर्म्पर्कलाई महत्व दिएको पाउन सकिन्छ । यो संस्था आफैमा एउटा अन्तराष्ट्रिय संस्था भएकाले यसले अन्तराष्ट्रिय संघ संस्थाहरुसँग पनि आफ्नो संस्थागत संचार तथा सम्वन्ध विस्तार गरको छ ।
जनसर्म्पर्कका लागि यस डिसी नेपाल संस्थाले विभिन्न प्रकाशन सामाग्रीहरु पनि प्रकाशन गर्ने गरेको छ । तर अन्य जनसर्म्पर्कका साधनहरुको तुलनामा जनसर्म्पर्कका लागि यस संस्थाले प्रकाशन सामाग्रीलाई भने अलि कम महत्व दिने गरेको पाइयो । कम महत्व दिए पनि जनसर्म्पर्कको माध्यमका रुपमा भने प्रकाशन सामाग्रीलाई स्थान दिएको छ । यस डिसी नेपाल संस्थाले भिजिटिङ कार्ड, ब्रोसर, स्टीकरलगायतका सामाग्रीहरु जनसर्म्पर्कका लागि प्रयोगमा ल्याउने गरेको पाइयो । डिसी नेपाल विशेषत प्रवासी नेपालीहरुमा बढी केन्द्रित रहेकाले प्रकाशन सामाग्रीहरुको जनसर्म्पर्कका लागि प्रकाशन सामाग्री कम मात्रै प्रयोगमा आउने गरेको बताउनु हुन्छ । उहाँको भनाईमा अन्य प्रकाशन र विद्युतिय संचार माध्यमहरुमा नै विज्ञापन तथा प्रचारका लागि संस्था बढी केन्द्रित रहेको छ ।
दुइ महिनासम्म यस डिसी नेपाल संस्थाले जनसर्म्पर्कका लागि प्रयोगमा ल्याइरहेका जनसर्म्पर्कका स्रोत तथा साधानहरुलाई हर्ेदा माथी उल्लेखित स्रोत र साधनको प्रयोगवाट माथी उल्लेखित आफ्नो संस्थाको जनसर्म्पर्कको काम गरिरहेको पाइयो । यी स्रोत र साधनका मद्दतले आफ्नो संस्थाका लागि राम्रो जनसर्म्पर्क गरिरहेको पनि स्पष्ट हुन्छ । दैनिक हजारौको संख्यामा डिसी नेपालको वेभ पेज खुल्नुले पनि यो संस्था राम्रो जनसर्म्पर्कका माध्यमवाट थुप्रै मानिसहरुका बीचमा जानसकेको भन्दा पनि कुनै अतियुक्ती नहोला । यी सबैको श्रय यस संस्थाको दरिलो जनसर्म्पर्कको कारणले गर्दा नै भएको हो । तर यसो भन्दैमा यस संस्थाले वेभ साइटमा दिने गरेका सामाग्रीको मानिसहरुमा लोकप्रिय हुनुमा कुनै भुमिका नभएको भन्ने चाही पक्कै होइन् । डिसी नेपालले आफ्नो कार्य जनसर्म्पर्कका माध्यमवाट राम्रोसँग गरिरहे पनि यस संस्थामा छुट्टै जनसर्म्पर्क विभागको व्यवस्था भने गरिएको छैन । त्यसैले यस संस्थाले छुट्टै जनसर्म्पर्क विभागको व्यवस्था गरिए यसको कार्य र त्यसको मद्दतले अझ बढी भन्दा बढी सेवाग्राही तथा उपभोक्ताहरु माझ पुग्न सकिन्थ्यो कि –
आर आर क्याम्पस
विए तेश्रो वर्ष पत्रकारिता
« नेपालमा विज्ञापन र अन्नपुर्ण पोष्टको पहिलो पृष्ठमा विज्ञापनको अवस्था नेपालमा सूचनाको हक »